Imbwa Leash Vagadziri & Vanopa | China Imbwa Leash Fekitori
Yakawedzera Bungee Inodzoserwa Imbwa Leash
1.Iyo Yakawedzera Bungee Inodzoserwa Imbwa Leash's kesi yakaitwa yemhando yepamusoro ABS + TPR zvinhu, kudzivirira kesi kutsemuka nekukanganisa kudonha.
2. Isu tinowedzera kuwedzera imwe bungee leash kune iyo inodzoserwa imbwa leash. Iyo yakasarudzika bungee dhizaini inobatsira kutora iko kushamisika kwekukurumidza kufamba kana ichishandiswa ine simba uye inoshanda imbwa. imbwa yako painosimuka kamwe kamwe, haugone kuwana pfuti-inotyisa, uye pachinzvimbo, iyo bungee mhedzisiro yeelastic leash inoderedza kukanganisa ruoko rwako nefudzi.
Chikamu chakakosha kwazvo chereash inodzokerwa chitubu. Yakawedzera Bungee Inodzoserwa Imbwa Leash ine yakasimba chitubu kufamba kwekunyatso kudzosa, kusvika makumi mashanu emazana nguva. Iyo inokodzera kune yakasimba imbwa hombe, iri pakati nepakati uye zvidiki zvipuka.
4.Extra Bungee Inodzoserwa Imbwa Leash zvakare ine 360° tangle-yemahara pet leash iyo inopa imwe rusununguko kuzvipfuyo zvako zvekufamba-famba uye haizozviputira mukati mekutungamira.
Tsika Inodzoreka Imbwa Leash
Iyo inokubatsira iwe kuti ubatisise yakasimba kubata zvakanaka, kunyangwe pane imbwa hombe dziri kudhonza uye dzichimhanya.
Rinorema basa remukati chitubu cheiyi tsika inodzoreredza imbwa leash inogona nyore kubata neine simba imbwa dzinosvika ku110 lbs.
Heavy Duty Inodzoreka Imbwa Leash
1.Iye Heavy Duty Inodzokororwa Imbwa Leash's kesi inogadzirwa neyemhando yepamusoro ABS + TPR zvinhu, kudzivirira kesi kutsemuka nekukanganisa kudonha.
2.Iyi inodzoserwa leash inotora ine yekufungidzira nylon tepi iyo inogona kuwedzera kusvika ku5M, saka ichave yakachengeteka zvakanyanya kana iwe uchishanda imbwa yako husiku.
3.Iyo Inorema Duty Inodzoreredza Imbwa Leash ine yakasimba chitubu kufamba kwekudzosa zvakanaka, kusvika makumi mashanu emazana nguva. Iyo yakakodzera kune yakasimba imbwa hombe, iri pakati nepakati uye imbwa diki.
4.Iyo Inorema Duty Inodzoreka Imbwa Leash zvakare ine 360° tangle-yemahara pet leash ipa rusununguko kune ako zvipfuwo kufamba famba uye hauzviwani iwe kuputirwa mukutungamira.
Wholesale Inodzoreka Imbwa Leash
Yekutengesa inodzoreredza imbwa leash inogadzirwa neyekusimudzira nylon tambo iyo inogona kutakura yakasimba kudhonza nembwa kana katsi kusvika kusvika 44lbs muhuremu.
Iyo yakawanda inodzoreredza imbwa leash inosvika kusvika kungangoita 3m, inogona kutakura iyo inokwira kusvika ku110lbs.
Iyi imbwa inodzoreredza imbwa leash ine ergonomic yekubata dhizaini, iyo inobvumidza kufamba kwenguva refu mukunyaradza, uye hapana kunetseka nekukuvadza ruoko rwako. Kunze kwezvo, izvo's pane kureruka uye kusatsvedza, saka hauzonzwa kuneta kana kupisa mushure mekufamba kwenguva-refu.
Inodzoreka Leash YeDiki Imbwa
1.Iyo yeRetractable Leash YeDiki Imbwa iri eco-inoshamwaridzika, isina-chepfu, uye isina hwema. Leash inopa hupenyu hwakareba kuti ushandise, uye yakasimba High-End chitubu inoita kuti leash iwedzere uye ipore mushe.
2.Durable ABS casing ine ergonomic grip uye anti-slip mubato, inonyatsonaka uye inokodzera muchanza cheruoko rwako, inokomberedza ruoko rwako segirovhosi. Iyo anti-slip dhizaini inodzoserwa leash kune imbwa diki ino chengetedza kuchengetedzeka, uye iwe unogara uchichengeta zvinhu zviri pasi pesimba. 3.Sturdy simbi snap chirauro zvakanamatira zvakanamatira kune chipika chekara kana sunga.
Tsika Heavy Duty Inodzoreka Imbwa Leash
1.Retractable traction tambo yakatambanuka ribhoni tambo. Dhizaini iyi inokutendera kuti utambanudzire tambo mushe mushe, izvo zvinogona kunyatso kudzivirira imbwa leash kubva kumhanyisa uye kuruka. Zvakare, dhizaini iyi inogona kuwedzera nzvimbo inotakura zvine simba patambo, kuita kuti tambo yekusungira iwedzere kuvimbika, uye kumira nesimba rakakura rekudhonza, zvichiita kuti mashandiro ako ave nyore uye zvinokubata iwe kuti uwedzere kugadzikana.
2.360 ° tangle-yemahara tsika inorema-basa inodzoserwa imbwa leash inogona kuvimbisa imbwa kuti imhanye zvakasununguka ichidzivirira dambudziko rinokonzerwa netambo kusungwa. Iyo ergonomic grip uye anti-slip mubato inopa yakasununguka kubata kunzwa.
3.Pano pane chakareruka chakaita seinotakurika poop tsvina bhegi dispenser uye 1 roll yemapurasitiki marara mabhegi pane mubato. Haina maoko-akasununguka uye nyore. Iko inokutendera iwe kuti unakidzwe zvechokwadi nemufaro wekufamba.